Mutongi Tora naMutongi Jairi (1-5)
Israeri anopanduka, opfidza (6-16)
VaAmoni vanodzika musasa kuti varwe nevaIsraeri (17, 18)
10 Pashure paAbhimereki kwakauya Tora mwanakomana waPua, mwanakomana waDhodho, murume wekwaIsakari kuti anunure vaIsraeri.+ Aigara muShamiri, munyika ine makomo yaEfremu. 2 Akatonga Israeri kwemakore 23. Akazofa, akavigwa muShamiri. 3 Pashure pake kwakauya Jairi muGiriyedhi uye akatonga Israeri kwemakore 22. 4 Aiva nevanakomana 30 vaitasva madhongi 30, uye vaiva nemaguta 30, ayo achiri kunzi Havhoti-jairi+ nanhasi; maguta acho ari munyika yeGiriyedhi. 5 Pashure paizvozvo Jairi akafa, akavigwa muKamoni. 6 VaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha,+ vakatanga kushumira vanaBhaari,+ mifananidzo yaAshtoreti, vanamwari veAramu,* vanamwari veSidhoni, vanamwari veMoabhi,+ vanamwari vevaAmoni,+ navanamwari vevaFiristiya.+ Vakasiya Jehovha uye havana kumushumira. 7 Jehovha akabva atsamwira vaIsraeri kwazvo, uye akavatengesa mumaoko evaFiristiya nevaAmoni.+ 8 Saka vakarwadzisa uye vakadzvinyirira vaIsraeri kwazvo gore iroro; vakaita makore 18 vachidzvinyirira vaIsraeri vese vaiva kudivi raJodhani raimbova nyika yevaAmori muGiriyedhi. 9 VaAmoni vaiyambukawo Jodhani kuti varwe naJudha naBhenjamini neimba yaEfremu; uye vaIsraeri vakashungurudzika chaizvo. 10 VaIsraeri vakabva vashevedzera kuna Jehovha kuti avabatsire,+ vachiti: “Takakutadzirai, nekuti takasiya Mwari wedu tikashumira vanaBhaari.”+ 11 Asi Jehovha akati kuvaIsraeri: “Handina kukununurai here kubva kuIjipiti,+ uye pavaAmori,+ vaAmoni, vaFiristiya,+ 12 vaSidhoni, vaAmareki, nevaMidhiyani, pavaikudzvinyirirai? Pamakachema kwandiri, ndakakununurai kubva muruoko rwavo. 13 Asi imi makandisiya mukashumira vamwe vanamwari.+ Ndokusaka ndisingazokuponesei zvakare.+ 14 Endai kuna vanamwari vamakasarudza, muvakumbire kuti vakubatsirei.+ Ngavakununurei munguva yekutambudzika kwenyu.”+ 15 Asi vaIsraeri vakati kuna Jehovha: “Takatadza. Tiitirei chero zvamunoona kuti ndizvo zvakanaka. Asi tinokumbirawo kuti mutinunure nhasi.” 16 Vakabvisa vanamwari vekune dzimwe nyika pakati pavo, vakashumira Jehovha,+ zvekuti akanga asisakwanisi* kungosiya vaIsraeri vachitambura.+ 17 Nekufamba kwenguva, vaAmoni+ vakaungana, vakadzika musasa muGiriyedhi. Saka vaIsraeri vakaunganawo, vakadzika musasa muMizpa. 18 Vanhu nemachinda eGiriyedhi vakataurirana vachiti: “Ndiani achatungamirira pakuenda kunorwa nevaAmoni?+ Munhu iyeye ngaave mukuru wevagari vese vemuGiriyedhi.”
^ Kana kuti “veSiriya.”
^ Kana kuti “mweya wake wakanga usisakwanisi.”